FAAHFAAHIN-Wiil Soomaali ah oo weeraray jaamacad kutaal Ohio USA. – Radio Daljir
FAAHFAAHIN-Wiil Soomaali ah oo weeraray jaamacad kutaal Ohio USA.
Noofember 28, 2016 9:33 g 0
Ohio, Nov 29 2016-Nin la sheegay inuu Soomaali yahay oo aan magaciisa la sheegin ayaa weeraray Jaamacadda magaalada Ohio ee dalka Maraykanka isagoo dhaawacay dad badan ka hor inta aysan boolisku tooganin.
Inta la xaqiiiyey toban qof ayaa ku dhaawacantay weerarka ka dib markii ninkan Soomaaliga ah uu si ulakac ah gaari u jiirsiiyay dad ku sugnaa Jaamacadda gudaheeda sida boolisku sheegeen.
Mas’uuliyiinta iyo maamulka Jaamacadda ayaa sheegay in hadda xaaladdu ay deggan tahay iyagoo xusay in Soomaaliga weerarkan geystay oo 20 jir ahaa uu ka tirsanaa ardayda wax ka barata isla jaamacada uu weeraray.
Booliska aya sheegay iney baarayaan waxa ninkan Soomaaliga ku kulifay inuu weeraro jaamacadii uu dhiganayey iyo inuu xiriir la lahaa iyo in kale kooxaha loogu yeero argagaxisada.